Aiza i Jesosy no mipetraka? , Fiangonan'Andriamanitra an'Andriamanitra Suisse (WKG)
Satria ao amin'i Jesosy ny fiainantsika marina, maneho ny vatany eto an-tany isika ary mitarika ny fiainana ara-panahin'i Jesôsy sy fitiavana. Izahay no ilay tadiaviny, ny sandry ifaliany, ny tanana ampiasainy, ny maso izay ahitany, ary ny vava iray entiny mampahery ny hafa sy midera an'Andriamanitra. Eto amin'ity fiainana ity dia ny hany hahitan'ny olona an'i Jesosy. Noho izany ny fiainany izay asehontsika dia tokony ho tsara kokoa! Izany koa no hitranga raha manao ny zava-drehetra isika ho an'ny mpihaino tokana - ho an'Andriamanitra sy ny zava-drehetra ho an'ny voninahiny.